Why Contextual Targeting Is Critical For Marketers Navigating The Kuki-Naa Ọdịnihu | Martech Zone
Anyị na-ebi na ngbanwe zuru ụwa ọnụ, ebe nchegbu nzuzo, yana ọnwụ kuki, na-etinye nrụgide na ndị na-ere ahịa ka ha wepụta mkpọsa ahaziri iche na nke ọmịiko, na gburugburu nchekwa-nchekwa. Ọ bụ ezie na nke a na-eweta ọtụtụ nsogbu, ọ na-ewetakwa ọtụtụ ohere maka ndị ahịa iji kpọghee usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi.
Na-akwadebe Maka Ọdịnihu Kuki-Naa
Onye na-ere ihe nzuzo na-arịwanye elu na-ajụ ugbu a kuki ndị ọzọ, yana akụkọ 2018 na-ekpughe 64% nke kuki ajụrụ, ma ọ bụ aka ma ọ bụ site na onye na - egbochi mgbasa ozi - na nke a bụ tupu iwu nzuzo nzuzo emejuputa. N'elu nke a, 46% nke ekwentị na-ajụ ugbu a na 79% nke kuki, na metrik ndị kuki na-ejikarị 30-70% erute.
Site na 2022, Google ga-ewepu kuki nke atọ, ihe Firefox na Safari enwetala. Enyere akaụntụ Chrome maka ihe karịrị 60% nke ihe nchọgharị weebụ ojiji, nke a bụ nnukwu ihe maka ndị ahịa na ndị mgbasa ozi, ọkachasị ndị na-eji mmemme. Ihe nchọgharị ndị a ka ga-ekwe ka kuki ndị ọzọ - ma ọ dịkarịa ala ugbu a - mana ihe doro anya bụ kuki enweghị ike ịdabere na ya iji kọwaa ezubere iche maka omume.
Gịnị Bụ Ebumnuche Ebumnuche?
Ebumnuche gburugburu bụ ụzọ iji lebara ndị na-ege ntị anya dị mkpa site na iji isiokwu na isiokwu sitere na ọdịnaya dị na ngwakọ ad, nke anaghị achọ kuki ma ọ bụ ihe nchọpụta ọzọ.
Arụ Ọrụ Ebumnuche Ebumnuche Na-eso Usoro
Ọdịnaya gburugburu ngwa ahia na ibe weebụ, ma ọ bụ n'ezie ụlọ ọrụ na isiokwu ndị dị na vidiyo, amịpụtara ma nyefee ha na injin ihe ọmụma.
The engine na-eji algọridim iji nyochaa ọdịnaya dabere na ogidi atọ, 'nchekwa, ịdị mkpa na mkpa' yana gburugburu nke e mepụtara.
More elu ngwọta nwere ike oyi akwa na ndị ọzọ ezigbo oge data metụtara gburugburu onye nkiri na ntabi a na-ele ma na-agbasa mgbasa ozi ahụ, dịka ma ọ bụrụ na ihu igwe dị ọkụ ma ọ bụ oyi, ọ bụ ehihie ma ọ bụ n’abalị, ma ọ bụ ọ bụrụ n’oge nri ehihie.
Ọzọkwa, kama akara akara nke kuki, ọ na-eji oge ndị ọzọ onodu dabere na onodu, dika ka mmadu si di nso na ihe masiri ya, ka o no na ulo, ka o na-eme njem, wdg.
Ọ bụrụ na ndị kwesịrị ekwesị akara gafere ọnụ ụzọ ndị ahịa, a na-eme ka Demand Side Platform (DSP) mee ka ọ gaa n'ihu na ịzụta mgbasa ozi.
Ebumnuche ederede dị elu na-enyocha ederede, ọdịyo, vidiyo, na onyonyo iji mepụta ngalaba ezubere iche nke na-adaba na ihe ndị chọrọ mgbasa ozi chọrọ, ka mgbasa ozi wee pụta na ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma kwesịrị ekwesị. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, otu akụkọ gbasara Open Australian nwere ike igosi Serena Williams na-eyi akpụkpọ ụkwụ onye egwuregwu bọọlụ Nike, mgbe mgbasa ozi maka akpụkpọ ụkwụ egwuregwu nwere ike ịpụta na gburugburu ebe dị mkpa. N'oge a, gburugburu ebe obibi dị mkpa maka ngwaahịa a.
Ihe Na-adị Mfe Karịa Iji Kuki Nke Atọ?
Emebere atụmatụ ịkọwapụta ihe dị irè karịa ịtụkwasị obi site na iji kuki ndị ọzọ. N'ezie, ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na ebumnuche gburugburu ebe obibi nwere ike mụbaa ịzụta ihe site na 63%, na-ege ntị ma ọ bụ na-elekwasị anya n'ọwa ọwa.
Otu ihe omumu a choputara 73% nke ndị ahịa na-eche mgbasa ozi dị mkpa kwadoro ọdịnaya zuru ezu ma ọ bụ ahụmịhe vidiyo. Na mgbakwunye, ndị na-azụ ahịa ezubere iche maka ọkwa ndị ọzọ 83% nwere ike ịkwado ngwaahịa a na mgbasa ozi, karịa ndị ezubere iche na ndị na-ege ntị ma ọ bụ ọkwa ọkwa.
N'ozuzu ahia ihu ọma bụ 40% dị elu maka ndị na-azụ ahịa ezubere iche na gburugburu ebe obibi, ndị ahịa na-eje ozi na mgbasa ozi ndị gbara ya gburugburu na-akọ na ha ga-akwụ ụgwọ maka akara. N'ikpeazụ, e gosipụtara mgbasa ozi kachasị mkpa Ntinye aka nke 43%.
Gụkwuo banyere ichebara echiche gbara gburugburu na akwụkwọ ọcha ọhụrụ anyị:
Budata akwụkwọ akụkọ agbadoro ederede
Tags: kuki chromemgbasa ozi gburugburu ebe obibigburugburu ahịaihe omuma ndi ozokuki-oberekukikuki firefoxkuki safari